3 Best Day Njem Site Budapest Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 3 Best Day Njem Site Budapest Site Train
Train njem Austria, Train Travel Czech Republic, Train njem Hungary, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 06/03/2020)
Ya mere, ị na-na na akpatre mere ya. Ị na-na na na-etinye na maka gị ezumike nọ ọrụ, zụtara gị ụgbọelu tiketi na-aga ka Hungary maka a ọma kwesịrị ezumike. Ma mgbe nke ahụ bụ ihe niile nke ọma na ezi – ka emechara, Budapest bụ a mara mma obodo – adịghị ere onwe gị obere site na ịrapara n'ahụ gburugburu isi obodo. Europe bụ a mma-ejikọrọ Afrika na ọtụtụ puku ndị nhọrọ maka ụgbọ okporo ígwè njem, na a na-agụnye Hungary. Ya mere, ozugbo ị na hụrụ Szechenyi Kwes bat ma nwee a pint na Beer Spa, isi nke obodo na otu n'ime ndị a 3 kacha mma Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè.
Nke abụọ kasị ukwuu obodo na Hungary na-mara dị ka ndị Capital nke Great Hungarian Plain, a-ekwo ekwo n'obodo bụ ebe obibi 200,000 ndị mmadụ. Historic na ndị mara mma, Debrecen dị 2 awa na 15 nkeji si Budapest ụgbọ okporo ígwè. Ya gburugburu na-eme ka a magburu onwe akwukwo maka Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè.
The Great Church na Debrecen bụ obodo gbadoro ụkwụ, na ọrụ dị ka ihe nnọchianya nke Protestantism na Hungary. E nwekwara ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie maka ị gaa na, dị ka Deri Museum, nke ụlọ ụfọdụ ndị kasị akụkọ ihe mere eme iberibe nile nke Hungary.
Echefula na-agbalị si ụfọdụ nke obodo nri na wine, dị ka nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-na na a ezi sommelier, i nwere ike na-ahọrọ “Bikaner”, a mpaghara emepụta wine na sụgharịta ka “n'ọbara ehi”. Ọ na-emepụta na Hungary, ke ọwọrọetop 'Valley of Beautiful Women' region. Yum!
Ọ bụrụ na ị na-na na a na-akwado nke thermal baths, Debrecen nwekwara ị kpuchie. Na a ọpụpụ si omenala, na Aquaticum Spa bụ ihe dị ka ihe ime ụlọ mmiri park. Featuring a elu domed n'uko na yi mmiri slide, these thermal baths are fun for the whole family.
2. Best Budapest Day Njem Site Train: Vienna, Austria
N'ihi na nke a na-esote ntinye nke Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè, anyị na-ahapụ Hungary kpamkpam na-aga Austria, Hungary ọdịda anyanwụ onye agbata obi. The isi obodo nke Austria, Vienna bụ a ọmarịcha obodo na karịrị 2 nde ndị bi. Ka ukwuu nke Hungary, Vienna nwekwara ụgha tinyere Danube. N'adịghị ka obere obodo, Otú ọ dị, Vienna na-juru n'ọnụ iche iche agbata, ngosi ihe mgbe ochie, nkiri, na iche nke nri.
Mara dị ka a ga-ehiwe isi na omenala na art, it also sports a thriving coffee scene and you’ll find hundreds of cafes along its winding streets. Vienna bụkwa n'ụlọ Schonbrunn, the summer residence of the Hapsburgs and one of many grand buildings throughout the city.
Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na oyi, Vienna bụ a kwesịrị-akwụsị ya Christmas ahịa. Ndị a fantastical ahịa bụ ihe ọ bụla na mkpirisi nke kpokọtara na n'otu ntabi akụkọ ọkụ, na-ekpo ọkụ mulled mmanya, na-ekpo ọkụ nkasi obi nri.
Ọ bụ ezie na njem bụ ogologo maka a ụbọchị njem si Budapest via ụgbọ okporo, e nwere ngwa-ngwa nhọrọ dị na n'akwụsịghị akwụsị nhọrọ. ọbụna ka mma, ị ga-esi na-elele ọzọ European mba anya gị ịwụ ndepụta.
Budapest na Vienna Ụgbọ oloko
3. Best Budapest Day Njem Site Train: Wiener Neustadt, Austria
N'ikpeazụ, anyị na-na na-abịa anyị na ntinye ikpeazụ, a ufọt ufọt sized obodo dị n'ebe ndịda nke Vienna. Ee, nke ahụ dị mma, anyị na kwukwara ọzọ Austrian ụbọchị njem a ndepụta. Gịnị bụ na? Ọma n'ihi na Wiener Neustadt (wezụga enwe a kemmeochi aha), bụ a-ekwo ekwo n'obodo nke fọrọ nke nta 50,000 ndị mmadụ, and it’s got it all in terms of things to do.
Dị nnọọ 30km si Vienna na dị nso na Hungarian-Austrian ókè bụ zuru okè Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè, obodo a akụkọ ihe mere eme jupụtara na agha maka akara si dị iche iche alaeze ukwu. N'agbanyeghị ihe ndị ahụ agha- ma ọ bụ ikekwe n'ihi ha – Wiener Neustadt evolved into an important military training ground with the construction of the Maria Theresa Military Academy in the 1700s.
Ịhapụ gara aga n'azụ, taa Wiener Neustadt bụ n'ụlọ ka ọtụtụ dị iche iche na-eme, gụnyere ọtụtụ n'èzí hiking na ogige ntụrụndụ. Ị nwere ike ịga Myra Falls maka ụfọdụ fabulous hiking, ma ọ bụ isi Gesaeuse National Park to take in the fresh air.
The obodo nwekwara ọtụtụ ncheta, ngosi ihe mgbe ochie, na veranda raara nye ihe atụ akụkọ banyere obodo ahụ. Ọ bụrụ na a niile na-ada ka nke ukwuu n'ihi na ị na – echegbula. Mgbe a zuru ụbọchị nke na-eme isi ndị Linsberg Asia Therme Spa maka a ohere wetuo obi (ma ọ bụ ọkụ elu!) ma zuru ike.
Budapest na Wiener Neustadt
Vienna na Wiener Neustadt
Prague na Wiener Neustadt
ego Topic: Prague
The Czech isi obodo bụ a bit kwa anya maka Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè ma obodo a bụ-agaghị Agbaghara. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya akụkọ ihe mere eme, ije, nri, na ọṅụṅụ. Ezie na ọ fọrọ nke nta 8 awa ụgbọ okporo ígwè si Budapest, ma ọ bụrụ na ị na-aga otú a ọ bụ ezi echiche iji njem site na Vienna (ị mara, ahụ dị egwu na obodo anyị kwuru n'elu).
N'ozuzu ego na full ochie ụlọ, a ọma-echebewo ochie square, na ụwa kasị ochie ọrụ Astronomical Elekere, Prague bụ a kwesịrị-eme gị European ezumike. Were ya ngwa ngwa ebe a na-enwe na-akpagharị gafee Charles Bridge, dechara na 1402. Ma ọ bụ ọbụna mma, put on your finest royal uniform and head to Vysehrad for the day to check out the ancient ruins of the former castle.
Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè na Budapest bụ a magburu onwe obodo nleta. Si ya mara mma boulevards ya ma ama thermal baths, obodo abụghị onye na-atụ uche. Ma ime onwe gị a ihu ọma na gaba ọ bụla mgbe a na mgbe inyocha ụfọdụ n'ime ihe obodo anwansi maka onwe gị. Ma ị na-sipping ụfọdụ n'ọbara ehi mmanya ma ọ bụ awụgharị anya ka a mba ọhụrụ kpam kpam, ahụ nlegharị anya na gị ezumike.
Otu ụzọ kacha mma ime Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè – enwe na mma na nchekwa nke na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na-eji Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “3 Best Budapest Day Njem Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-budapest-day-trips-train/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
ụgbọ ala njem Atụmatụ, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe
Train njem, Train njem Austria, Train njem France, Train njem Germany, Train njem Italy, Travel Europe
Train njem Austria, Train njem Belgium, Train njem France, Train njem Italy, Train njem Spain, Train njem Switzerland, Train njem UK, Travel Europe